Blog Archives - Page2of 35 -
ထိရောက်တဲ့ Email တစ်စောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ?
၁. ကိုယ့်ရဲ့ Email အတွက် လိုအပ်တဲ့ Campaign တွေ Design နဲ့ Message တွေကို သက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကိုအခြေခံပြီး
သင့်ရဲ့ Business ကို သင့်တော်တဲ့ Digital Marketing Agency တစ်ခုနဲ့ အလုပ်အပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ?
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို Digital Marketing Agency နဲ့ ဈေးကွက်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက် တွေကို သိထားသင့်ဖို့လိုပါတယ်…
လုပ်ငန်းအပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာသိပါစေ
ပထမဆုံးအချက် အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် Agency ကို မဆက်သွယ်ခင်မှာ Agency ကိုအပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Objective တွေကို သေသေချာချာ မှတ်တမ်းပြုစုပါ။ သင့်ရဲ့ Website (သို့မဟုတ်) Page တွေမှာ
Posted by Min Thuta/ Friday March 29th, 2019/ Blog/0Comment
User တွေ သိပ်သတိမထားမိတဲ့ Instagram ရဲ့ Shopping Option
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ Social Media Platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn အစရှိတဲ့ Social Media Platform တွေပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကိုလုပ်ကိုင်လာကြပါပြီ။ ဥပမာ- အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက် Online Shopping ဆိုရင်တော့ Social Media တစ်ခုခုပေါ်မှာ လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Facebook ကိုအဓိကထားပြီး Online
Content Marketing အတွက် သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်များ
Digital Marketing နယ်ပယ်မှာ Content ဖန်တီးမှုဟာ အရေးပါပြီး Content တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး ။ Creative ဖြစ်ပြီး Audience တွေအကြိုက် Content တစ်ပုဒ်ရဖို့အတွက် Trend ကိုအမှီလိုက်နိုင်ဖို့သာမက ခေတ်နဲ့လျော်ညီပြီး Audience ရဲ့ စိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မဲ့ အရေးအသား အသုံးအနှုန်းတွေကို ဂရုတစိုက် ဖန်တီးရေးသား တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Content တစ်ပုဒ် ဖန်တီးပြီးရင်လဲ
Customer Rating ကောင်းနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်များ
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် Customer Rating ကောင်းရဖို့ဆိုတာ အရေးပါတဲ့အချက်ပါ။အထူးသဖြင့် Social Media ပေါ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ Customer Review တွေကပိုပြီးတော့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။ Social Media မှာက မကောင်းတဲ့အရာဆိုပိုပြီး ပြန့်နှံ့တာမြန်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ Product/Service ကိုအားနည်းချက်နည်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းပေါ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် Product/Service တွေရဲ့ ရောင်းအားအတွက် Customer Rating ကအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday March 28th, 2019/ Blog/0Comment
Social Media Marketing အတွက် သိထားသင့်တဲ့ 5P
5P Social Media Marketing ဆိုတာကတော့ Social Media Marketing လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်
အခြေခံ သဘောတရားအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ဒီတော့ 5P
Social Media Marketing က ဘာတွေလဲဆိုရင်တော့…
5. Prove တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Plan ဆိုတဲ့ အချက်လေးကတော့
Posted by Min Thuta/ Wednesday March 27th, 2019/ Blog/0Comment
2019 အတွက် အကောင်းဆုံး Facebook Messenger Chatbot List များ
Facebook Campaign တွေနဲ့ Business Run နေတယ်ဆိုရင် Facebook Campaign မှာအရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်မယ့် Chatbot တွေကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ Messenger Chatbot တွေဟာဆိုရင် Facebook Posts နဲ့ Email Marketing နည်းလမ်းတွေထက် 80% ပိုမိုသာလွန်တဲ့ Engagement ကိုရရှိစေပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး Messenger Chatbots
သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ Instagram’s Story တင်ပုံတင်နည်းအချို့
Digital Marketing နယ်ပယ်အတွက်အရေးပါတဲ့ Video Content
ယခုတစ်ခေါက် Super Sunday မှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ Video Content တွေဟာ Digital Marketing နယ်ပယ်မှာ ဘယ်လောက် အရေးပါလဲဆိုကို ဖော်ပြပေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…Video Content ဟာ Facebook, Twitter, Linkedin စတဲ့ Platform တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ User များရဲ့Share ခြင်းကိုအခြားသော Post များထက်အဆ ၂၀ သာလွန်အောင်ဆာင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်
Posted by Min Thuta/ Sunday March 24th, 2019/ Blog/0Comment
Social Media ဘယ်ကစတင်စတင်ပြန့်နှံ့လာခဲ့သလဲ?
ယခုတစ်ပတ်မှာ ပြန်လည် ဝေမျှချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ Social Media ဘယ်အချိန်လောက်မှာ စတင်ပြန့်နှံ့လာလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Social Media Channel တွေဟာ 2000 ခုနှစ်လောက်ကထဲကစတင်ပြန့်နှံ့လာပြီးယခုအချိန်မှာတော့ လူတွေဟာ ပျမ်းမျှ ၁၃၅ မိနစ်လောက်အချိန်ကို Social Media Channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook , Instagram, Twitter စတာပေါ်မှာနေ့စဉ်ကုန်ဆုံးကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ